Izindaba zokushoda kwe-oksijini?
Ithangi likaphethiloli le-LNG
Isiteshi esinyusa amandla seLNG
Akufanele kube nesizathu sokuntuleka kokuhlinzekwa komoya-mpilo, futhi imboni yamagesi yezokwelapha neyezokwelapha ithatha zonke izinyathelo eziwusizo ukuphatha ukuqina nokusatshalaliswa kwephiko lokuhambisa.
Imboni ibuye ixhase ukuxhaswa kwayo ekukhiqizweni okuphuthumayo kwezinhlelo zemishini yokungena kanye nemishini.
Yilokho okutholwe lapho kuhlolwa i-gasworld ekuhlinzekeni i-oksijini yezokwelapha, kulandela imibiko ehlukahlukene ephathelene nabezindaba.
Imibiko ibisanda ukwanda ukuthi ukuthuthuka okusheshayo okuhlobene nokuqubuka okuqhubekayo kweCovid-19 (coronavirus) kudala izingqinamba enkanjini yokuhlinzekelwa kwezokwelapha lapho kuhlangana khona ama-ventilators, ezinye izinsiza kanye nomoya-mpilo.
Le yinto yokugcina eseyivele inezinkinga, uma ingakhungathekiswa, izinhlelo zokunakekelwa kwempilo zidinga ikakhulukazi eYurophu okwamanje - manje sezicubungule ingqophamlando yalolu bhubhane. Ngaphandle kokushaywa uvalo phakathi komphakathi, ingabe imibiko enjalo iyiqiniso ngokunikezwa komoya-mpilo, igesi yezokwelapha ngokuvamile engabhekwa njengemakethe eqinile?
Ngaphambi kokuthi siphendule, kufanele siqonde kuqala ukuguquguquka kwemakethe ye-oksijini yezokwelapha kanye nebhizinisi le-oxygen ebanzi.
Enye yamagesi omoya abalulekile, inqwaba yokuhlinzekelwa komoya-mpilo ngomkhakha kukhiqizwa ngenqubo yokuhlukanisa umoya kwisetshenziswa i-ASU (unit ukwahlukanisa umoya).
Ngokujwayelekile, umoya nxazonke uqukethe i-78% nitrogen, i-21% oxygen (approx.) Ne-1% ye-argon nezinye izifunda (amagesi angavamile anjenge-krypton, neon ne-xenon). I-ASU ithatha lo moya omningi womkhathi bese kuthi, ngezigaba eziningana zokuhlukaniswa nokukhulunwa, bawuthelele kulezo zinto ngazinye (i-oksijini, i-nitrogen, i-argon).
i-gasworld iyaqonda ukuthi ezimweni ezijwayelekile la ma-ASU noma izitshalo zivame ukusebenza cishe kuma-75-85% omthamo wazo omkhulu, ibhalansi yokusebenza kahle phakathi kokulethwa nokufunwa. Lokhu kusho ukuthi ukuphuma kwe-oxygen, umkhiqizo ovame ukungahambisani nokunikezwa okufushane, kungakhuphuka njengoba isidingo sidingeka futhi ngaphandle kokwakhiwa kwezitshalo ezintsha
Ngo-Ephreli 2019, uShijiazhuang Enric Gas Equipment Co, Ltd. wawina isihloko se- “Outsificent Contributor Unit” esinikezwe imboni yezemishini yamakhemikhali yaseChina. Lesi yisikhumbuzo seminyaka engama-30 sokusungulwa komkhakha wemishini yamakhemikhali waseChina. Izikhungo zamabhizinisi ezinamalayisense zizokhethwa zibe yiminikelo yokunikela engagudlukiwe emgubhweni weminyaka engama-30 we-China Chemical Equipment Achievement Commemorative Book.
IShijiazhuang Enric ibilokhu inamathisela ukubaluleka okukhulu emsebenzini womkhiqizo osezingeni eliphakeme, iqinise ukuqamba okusha kwesayensi nezobuchwepheshe, igqugquzele ubuchwepheshe obukhulu be-90, yathuthukisa izinga lokukhiqiza lenkampani yemikhiqizo eqiniswa ubunzima, futhi yaqhubeka nokwenza ngcono futhi yathuthukisa izinga lobuchwepheshe lemikhiqizo yegesi kagesi . Ukuqashelwa kwamakhasimende we-high-end nethonya lomkhakha. Okwamanje, ukuthola isihloko se- “Outsential Contribution Unit” futhi kungukuqinisekiswa komsebenzi ojwayelekile wokukhiqiza waseShijiazhuang Enric we-ASME owenziwe ngumkhakha wezemishini wamakhemikhali waseChina.
Umkhakha wokukhiqiza izitsha zokucindezela unendlela ende okufanele uhambe ngayo. IShijiazhuang Enric izobophezela ekwakheni ukuma okujwayelekile, ukuklanywa kwamamodeli, ukuthuthukisa ikhwalithi, ukuwina amakhasimende, kanye nokufaka isandla ekwakhiweni komkhakha wemishini wamakhemikhali waseChina.